हेर्नुहोस् तपाई को भाग्य ! मंसिर ७ गते देखी १३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल – Complete Nepali News Portal
हेर्नुहोस् तपाई को भाग्य ! मंसिर ७ गते देखी १३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
२०७७ मंसिर ७ गते देखी मंसिर १३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) – मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आय आर्जनका निम्ती सामान्य झन्झटको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । गरीरहेको कार्य परीवर्तनको सम्भाबना अधिक रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा खर्चिएको समय उत्तम साबित रहनेछ । आफुभन्दा सानाहरु सगँ बिताएको समय अबिस्मरणिय रहनेछ । मंगलबार पश्चात भने असामान्य खर्चको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका दृष्टीकोणमा पनि सामान्य समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ । पारीवारका सदस्यहरुबाटँ टाढाँ भएको अनुभव रहनेछ । कार्यसम्पादनमा बिशेष गोपनियताको आवश्यकता रहनेछ । प्रतिद्वन्दीहरु सवल रहनाले अति चनाखोरहि कार्य सम्पादनगर्नु पर्नेछ । बिहीबार देखी भने पारीवारिक साथसहयोगमा बृद्यिहुनेछ । ब्यपार ब्यवसायमा सामान्य लाभ प्राप्तरहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा समेत प्रगाढता छाउनेछ । नयाँकार्यको थालनिले आम्दानिका दिर्घकालिन श्रोतहरु तयार हुनेछन । मानप्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । यो साता मध्यम बित्नेछ ।